यी हुन् लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको ठेक्कामा चलखेल गर्ने १२ कम्पनी - Kantipath.com
यी हुन् लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको ठेक्कामा चलखेल गर्ने १२ कम्पनी
लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको विवादित ठेक्कामा चारजना व्यवसायीको अगुवाइमा १२ जनाले ठेक्का लिने चलखेल गरेको खुल्न आएको छ। कोषले गत जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न चारवटा प्याकेज तयार गरी बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक साढे तीन अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्कामा मुख्य रुपमा चारवटा ठेकेदार कम्पनी र तीअन्तर्गत तीन र दुईजनाका दरले ९ वटा कम्पनी ज्वाइन भेन्चर (जेभी) मा समावेश गरी ठेक्का मिलाउन चलखेल गरिएको हो। कोष सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार १२ जना व्यवसायीले २ देखि ५ प्रतिशतसम्म रकम घटेर ठेक्का मिलाउने तयारी गरेका छन्। त्यसअनुसार मिलेर ठेक्का हालिएको छ। कोषले बिहीबार ठेक्का खोल्दैछ।
कोष स्रोतले चार मुख्य कम्पनीमा अर्घाखाँची, बाबुल, लुम्बिनी र कमलजित रहेको जानकारी दियो। यीसँगै जेभीमा समावेश हुने कम्पनीहरूमा रमन, गजुरमुखी, एपेक्स, लामा, बुद्ध, हनुमान, राम जानकी र खानी निर्माण सेवा छन्। यी १२ वटै कम्पनीको मिलेमतोमा बोलपत्रको प्रावधान तयार गर्दा मुख्य चार कम्पनीको अनुभवलाई मात्र मिल्नेगरी बनाइएको छ।
अर्कोतिर साढे तीन अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा सुरुमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने काम गरिएको कोष स्रोतको दाबी छ। कानुनले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको ठेक्का लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बोलपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, यहाँ निर्माण व्यवसायी र कोषका केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा ठेक्कालाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा तल बनाएर चारवटा प्याकेजमा तयार गरिएको छ। कानुनले ठूलो रकमको ठेक्कालाई त्यसको औचित्य हेरेर ससाना टुक्रामा बनाउन पनि सुविधा दिएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
कानुनको यही छिद्रता प्रयोग गरेर चारवटा प्याकेजमा ठेक्का तयार पारिएको हो। ठेक्कामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेे चार कम्पनीले अहिले ककसलाई जेभीमा राख्ने भनेर सबै मिलाएका छन्। File photo
Previous Previous post: एमालेको केन्द्रिय समिति बैठक चौथो दिन पनि जारी : स्पष्टिकरणबारे निर्णय हुने
Next Next post: सशस्त्र प्रहरीभित्र एउटै दर्जामा १६ वर्षसम्म बढुवा नहुने
मेरो घर घेर्न २५ जना मुङ्ग्रेहरु पठाएछन् तर म धातुले बनेको छु गल्दिन : माधव नेपाल
पार्टी गुम्ने खतरा बढेपछि महन्थ ठाकुर अदालतको दैलोमा
एक वर्षमा १३२ दुर्घटना, ४६ ले ज्यान गुमाए
नक्कली कागजात बनाई ७४ लाख ठगी, तीन पक्राउ
टोकियो ओलम्पिक आज उद्घाटन हुँदै
९८ जना सईको इन्स्पेक्टरमा बढुवा (सुची)
SEE को पुरक परिक्षा स्थलबाटै विद्यार्थी गिरफ्तार
लासमाथि उड्ने गिद्धजस्ता बस्नेत !
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ चिन जानै लाग्दा चिनिया रक्षामन्त्री नेपाल आइपुगे
उपत्यकामा जात्रा पर्वमा भीडभाड नगर्न आग्रह
भाडा नतिरेपछि वडा कार्यालयमै ताला !
अवकाशको एक महिना पछि सर्वोच्चद्वारा डीआईजी श्रेष्ठको थमौती : अब आईजीपीका दाबेदार !
पोर्न फिल्म काण्डमा अर्की अभिनेत्री मुछिइन्
भक्तपुरको सल्लाघारीमा ३.५ म्याग्निच्युटको भूकम्प
एमाले एकताको जिम्मा पाएका ओलीको रुखो भाषा : बाटो बिराएकालाई आममाफी दिन्छु !
मस्तिष्क र फोक्सोलाई असर गर्ने ‘कालो ढुसी’ बाट भारतमा ४,३०० को मृत्यु
कर छलीको आरोपमा दैनिक भाष्करको कार्यालयमा प्रहरीको छापा